မေဝင်းမောင်သည် ၁၉၇၃ တွင် ဒါရိုက်တာ ဦးချစ်စိန်(ရှူမဝ) ရိုက်ကူးသော လှချင်ရက်စက်စက်ယိုဇာတ်ကားဖြင့် အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်လာသည်။ ဇာတ်ကား ၆၀ ခန့် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၁၉၈ဝ ခုနှစ်တွင် ယမုံနာ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဒါရိုက်တာ ကြီးမြင့် ရိုက်ကူးသည့် “ကြည်ပြာ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဖြင့် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ကို ရရှိခဲ့သည်။
the Rangoon Arts and Science University (RASU)
သိင်္ဂါမောင် သူရဝင်း၊ မေသန္ဒီနဝရတ်ဝင်း
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု (အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင် ၁၉၈၀)
ခင်ပွန်းသည်မှာ ဦးသက်ဝင်းဖြစ်ပြီး၊ သား သိင်္ဂါမောင် သူရဝင်း နှင့် သမီး မေသန္ဒီနဝရတ်ဝင်း နှစ်ဦးထွန်းကားသည်။ လက်ရှိတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ တွင် မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်သည်။
၁၉၇၃ - လှချင်ရက်စက်စက်ယို (ကျော်ဟိန်း)
၁၉၇၄ - စိမ် (သို့မဟုတ်) စိန် (ကျော်ဟိန်း)
၁၉၇၅ - သုံး သို့မဟုတ် လေး (မောင်သန်းဝင်း)၊ ရွှေလက်မြဲမြဲတွဲပါ့မယ် (ကျော်စွာဝင်း)
၁၉၇၆ − ဒီလိုဆို ချစ်ဘူးကွယ် (လင်းထင်)၊ ခေတ္တရာခရီးသည် (ကိုမြင့်)
၁၉၇၇ − ကျွန်းကလေးမှာ နှစ်ယောက်တည်း (ကျော်မောင်မောင်သွင်)၊ ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး (လင်းထင်)၊ အပေါ်ထပ်နှင့်အောက်ထပ် (မောင်သန်းဝင်း)၊ မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒ
၁၉၇၈ − ပုလဲရောင်မမှိန် (ခင်မောင်ချင်း)၊ အတ္တမဆန်သောအတ္တ (ညွန့်ဝင်း. သုမောင်)
၁၉၇၉ − ယုန်ထောင်ကြောင်မိ (ညွန့်ဝင်း)၊ စုံနံ့သာမြိုင် (ညွန့်ဝင်း)၊ ကျွန်တော်မောင်စပ်စု (စပ်စု)၊ ဇမ္ဗူ ပေါ်လူကျော် (ခင်မောင်ချင်း)
၁၉၈၀ − စိမ့်မြိုင်က စောင်းသမား (တေဇာမင်း)၊ မျဉ်းပြိုင်ကြားရွှေမင်းသား (ခင်မောင်ချင်း)၊ ချိုကြီးချိုလေး (ညွန့်ဝင်း . လင်းထင်)၊ ဖေဖေ့သား (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း)
၁၉၈၁ − သူရဲကောင်းလေးများ (ဇော်ဝမ်း)၊ ကံကောင်းလို့ခေါ်ပါ (ထွန်းထွန်းဝင်း)၊ မမေ့ဆယ်ကမ္ဘာ (ကျော်ဟိန်း)၊ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ (အောင်အောင်)၊ ပုဝါနီနီ (ကျော်ဟိန်း . လင်းထင်)၊ ကြည်ပြာ (ထွန်းထွန်းဝင်း) ( * )
၁၉၈၂ − အချစ်သစ်ပင် (ကျော်ဟိန်း)၊ ချစ်ပါရဲ့လားမေးစမ်းချင် (ကျော်ဟိန်း)၊ ဝေလု (ဝင်းဦး . အေးမင်းဝင်း)၊ ရှံစားရဲ့ရှံစား (အောင်အောင်)၊ ကိုကိုလူလည်ကြီး (ကျော်ဟိန်း)၊ ဒေါက်တာဖေငယ် (ညွန့်ဝင်း)၊ အရွယ် (ဇော်ဝမ်း . သုမောင်)၊ ဇော်ဆွဲ (အောင်အောင်)၊ ရင်ငြိမ်းအေး (အောင်အောင်. သုမောင်)၊ နှစ်ယောက်တည်းနေချင်တယ် (ဝင်းဦး . အေးမင်းဝင်း)
၁၉၈၃− ချစ်တဲ့သူငယ်လေ (မောင်ရူပ)၊ သွေးသောက်ကျော်စွာ (အောင်အောင်)၊ မုန်းချင်သလောက်မုန်းလိုက်စမ်း (အောင်အောင်)၊ ဟေ့ ချစ်ချစ် (စိန်မြင့်)၊ အလယ်လူ (ဆိုးပေ. မောင်မဲ)၊ ချစ်အိမ်ထဲကမိသားစု (ညွန့်ဝင်း)၊ လူသစ်စိတ်သစ် (ထွန်းထွန်းဝင်း)
၁၉၈၄ − ဂျက်မ (ကျော်ဟိန်း)၊ ဆန္ဒရဲ့မျှော်လင့်ချက် (ကျော်ဟိန်း)၊ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေဝေ (တိုးညွန့်)၊ သဘင်သည်မဝင်ရ (ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း. စိန်မြင့်)
၁၉၈၅ − လူထဲကလူ (ကျော်ဟိန်း)၊ သစ္စာသည်သာ (စိုးသူ . ဇော်ဦး)၊ ရတနာကျွန်း (ကျော်သူ)
၁၉၈၆ − ပန်းကလေးများလို လန်းဆန်းပါစေ (ကျော်သူ)၊ သိန်း ၃၀ နှင့် လူစိမ်းတစ်သိုက် (ကျော်သူ)၊ ဒီမျက်နှာလေးကို ချစ်တာ (ပြေငြိမ်း)
၁၉၈၇ − သားတို့မေမေ (စိုးသူ)၊ လူနောက် (ဇာဂနာ)၊ နွေဦးရောက်ပြီကိုကို (ရန်အောင် . လွှမ်းမိုး)၊ မုန်းစကားမဆိုနဲ့မိမိမုန်း (ကျော်သူ)
၁၉၈၉ − အလွမ်းပြေပေါ့ကိုကိုရယ် (ပြေငြိမ်း)၊ ဒိုး (ကျော်သူ)
၁၉၉၀ − မလိမ်မိုးမလိမ္မာ (ပြေငြိမ်း)